ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံလို့ ထမင်းဝခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူး။ သူ့ ကိုထောက်ခံလို့ ထမင်းငတ်ခဲ့တာပဲရှိခဲ့တယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံလို့ ထမင်းဝခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူး။ သူ့ ကိုထောက်ခံလို့ ထမင်းငတ်ခဲ့တာပဲရှိခဲ့တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံလို့ ထမင်းဝခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူး။ သူ့ ကိုထောက်ခံလို့ ထမင်းငတ်ခဲ့တာပဲရှိခဲ့တယ်။
Posted by phone_kyaw on Dec 19, 2011 in Copy/Paste | 38 comments
ဒီစကားကိုပြောလို့ ဝိုင်းတော့မဆဲကြနဲ့ ။ သူ့ ကိုထောက်ခံပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေ ထောင်ထဲမှာ ဘယ်လို နေထိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာကို အားလုံးသိမယ်ထင်တယ်။ စည်းရုံးရေးတွေ လူထုတရားပွဲတွေဘယ်လိုမျိုး ထမင်းငတ်ခံပြီးထောက်ခံခဲ့ရလဲဆိုတာကို အားလုံးသိမယ်။ သူ့ ကိုထောက်ခံလို့တစ်ခါမှ ထမင်းမ၀ခဲ့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီစကားကိုပြောတာပါ။
သူ့ ကိုမထောက်ခံဘူးဆိုရင် နအဖ အစိုးရကိုထောက်ခံမလားလို့ မေးရင်လည်း မထောက်ခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘယ်သူ့ ကိုထောက်ခံမလဲ။ ကျနော်ကတော့ အပြောနဲ့ အလုပ် ညီတဲ့လူ။ လက်တွေပြနိုင်တဲ့လူတွေကို အားပေးမယ်။ ထောက်ခံမယ်။ လေနဲ့နိုင်ငံရေးကိုလုပ်တာ လွယ်တယ်။ ခက်တာက အကောင်အထည်ပြနိုင်ဖို့ ပါ။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ဘာ့ကြောင့်ဒီလောက်ကြာလဲဆိုတော့ အုပ်စိုးသူတွေလူကြီးတွေ သုံးစားလို့ မရလို့ ပါ။ အတိုက်အခံကော သုံးစားလို့ ရလားဆိုတော့ မရဘူး။ ပြည်သူကတော့ ကြားထဲမှာ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ ။
စစ်သားတွေဟာ စစ်တပ်ထဲမှာ နေတာကပိုပြီးကောင်းတယ်။ အခုကြည့် စစ်သားဟောင်းတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်။ စစ်သားဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်မလုပ်ပဲနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်မှတော့ ဒီတိုင်းပြည်ဟာ မပျက်ပဲဘယ်နေပါ့မလဲ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ စစ်သားတွေပဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဆိုတော့။ ဒါ့ကြောင့်လည်း တိုင်းပြည်ပျက်ပါတယ်။ လူတွေမွဲပါတယ်။ အရပ်ဝတ်ပဲ ၀တ်ဝတ် ယူနီဖောင်းပဲဝတ်ဝတ် ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်တာက ပိုပြီးအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်။
အတိုက်အခံကိုလူတွေအားပေးတယ်။ အတိုက်အခံက လူတွေအားပေးတဲ့အတိုင်း အာဏာမရခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ ခင်းပေးတဲ့လမ်းကို လျှောက်ရတဲ့အထိ ညံ့ဖျင်းလှတဲ့အတိုက်အခံဘ၀ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ရင်တာင် ဘာများလုပ်ပေးနိုင်မှာမို့ လဲ။ အရင်တုန်းကလည်း ဒါပဲဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့။
အစိုးရဟာ ဘာ့ကြောင့် ဒီအချိန်ကြမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ သူတို့ မနိုင်တော့လို့ ပါ။ ပြည်သူတွေကို သူတို့ အရင်တုန်းကလို လုပ်လို့ ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဘာ့ကြောင့်ပြောင်းလဲဆိုတာကို အစိုးရ၀န်ကြီးတွေတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဘူး။ တစ်ချိန်လုံးသူတို့ မှန်ကြောင်းတွေချည်းပဲ ချီမွမ်းခန်းဖွင့်ကြတယ်။
ကျနော့်ဆန္ဒကတော့ လက်ရှိအတိုက်အခံ နဲ့ အစိုးရကို လုံးဝမယုံကြည်ဘူး။ နောက်ထပ် တက်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုပဲ အားကိုးတကြီးမျှော်လင့်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရင်လူဟောင်းတွေကို ရှင်းထုတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ လူဟောင်းတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အရည်အချင်းတွေက သုံးစားလို့ မရခဲ့လို့ ပါ။ လူဟောင်းတွေဆိုတာက လက်ရှိအန်အယ်ဒီက လူဟောင်းတွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ က လူဟောင်းတွေကိုဆိုလိုတာပါ။
အရင်တုန်းက ကျနော်ထောက်ခံခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယနေ့ မှာ မဲ မပေးတော့ပါဘူး။
တခြားသူတွေအလှည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်.. ..တရက် ၂ပုဒ်ထက်ပိုမတင်ရပါဘူး.. ။
… ဒီပို့စ်တော့ ..တရက် Hold ထားလိုက်ပါမယ်..။
မျိုးဆက်သစ် တွေကို ကောဘယ်လောက် ထိယုံကြည်ရပါမည်လဲ။ ဒိုင်းဝန်ထက် ကဲနေလျှင်မခက်ပါလား။ လက်ရှိ အနေအထားသည် အကောင်းဆုံး အနေအထားလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အတိတ် ကိုတမ်းတ နေရင် နောင်တ ဖြင့်နေရပြီး မရောက်သေးသော အနာဂတ် ကို မျှော်လင့်နေလျှင် ပင်ပန်းပါလိမ့်မည်။
လူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ၁၉၉၉-၂ဝဝ၅ ထိ တာဝန်ထမ်းသည်
ဆိုတာ ၁၃နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဘာ တာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသလဲ…ဥက္ကဌလား
အစေခံလား လုပ်စမ်းပါအုံးဘ၀ဇာတ်ကြောင်းလေး ……
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေဘာဘာ(the lady)လိုပေါ့ ရိုက်လိုက်ရယင်အိုကေသွားနိုင်တယ်
ကိုရင်မောင်ကြီး .. သူ ၁၉၇၉ မှာမွေးပြီး ၁၉၉၉ မှာ တောခိုတယ်လို့ ရေးထားတာ.. ၁၃ နှစ် သား မဟုတ်ဘူးလေ..
Rich Dad Poor Dad: ဘယ်အစိုးရတက်တက်(ဒီမိုကရက်တစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရီပတ်ဗလစ်ကန်ဖြစ်ဖြစ်) ကိုယ့်အသုံးစရိတ် ကိုယ်ပဲပေးရမှာပဲ။
ဒေါက်တာမောင်ဘချစ်။ ။မောင်ဘချစ်တို့ငယ်ငယ်ကပုံပြင်လေးကိုသတိရသည်။ ကောက်ကျစ်သော ခြင်္သေ့ကြီး၏ ပုံပြင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ အဲဒီ စကားမျိုး တွေ ကြားတိုင်း မေးခွန်း မေးချင်မိတယ်။
နိုင်ငံရေးလုပ်ကြသူတွေဟာ ဘာရည်ရွယ် ချက် နဲ့လုပ်နေကြတာလဲ။
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေရာ ရ ဖို့ ပံ့ပိုးဖို့ နိုင်ငံရေး ဆိုတာကို လုပ်တာလား။
(၂) ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် နဲ့ ချို့တဲ့နေတဲ့ တိုင်းပြည် အတွက် လုပ်ပေးတာလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေရာ ရ ဖို့ သာပံ့ပိုး ပေးခဲ့တာ ဆိုရင်တော့ အဲဒီလူဟာ တိုင်းပြည် အတွက် Worthy မဖြစ်ပါဘူး။
အဲဒီ လူ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုမှီပြီး နေရာယူဖို့ လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးရှာသူပါ။
ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် နဲ့ ချို့တဲ့နေတဲ့ တိုင်းပြည် အတွက် ဆိုရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခုလို ဖြစ်နေတာကို မရှုစိမ့် စရာမလိုပါဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပွဲမပြီးသေးပါဘူး။ စဖို့ပြင်ရုံ ရှိပါသေးတယ်။
ပြည်သူတွေ ငတ် နေတုန်း ပါဘဲ။
ပြည်သူတွေ အတွက် ဆိုရင် ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲတွင်းက မလွတ်သ၍ နည်းမျိုးစုံ သုံးရပါမယ်။
ပညာရှိနည်း ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လဲ ပညာရှိ နည်းကို ရွေးတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
“ဒို့ အရေး” အော်တိုင်းမှ နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ပါ။
တိုင်းပြည်ကောင်း အောင် အတွက် ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ လုပ်တာမှန် သမျှ နိုင်ငံရေးပါ။
အင်း လူတွေက ဆဲတော့သာဆဲတယ်ပြောတယ်။
အဆဲခံလောက်တဲ့ အသိဥာဏ်မျိုးတွေ လောကကြီးထဲ ရှိနေတတ်တာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။
အခုအချိန်မှာ ကိုဂျော်နီအောင်ပုကို ကိုယ်ချင်းစာနေမိတယ်ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ။
ထမင်းဝဖို့ပဲ အဓိကထားနေတော့ ထမင်းဝရုံပဲ ဖြစ်နေတာမဆန်းပေ။
“မတည်တံ့သောစိတ်ရှိသော သူတော်ကောင်းတရားကို မသိသော ပေါလောပေါ်သော ယုံကြည်မှုရှိသူ၏ အသိဥာဏ်ပညာ သည် မည်သည့်အခါမှ မပြည့်စုံ။“ (ဓမ္မပဒ – ၃၈ စိတ္တ၀ဂ်)
ရှိဖို့အဓိကပဲ ပိုက်ဆံရှိရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းဘောလုံးပွဲ ကြည့်ခိုင်းလို့ရတယ် ဦးသန်းရွှေသမီး
စကားဝိုင်းလို လေကန်ဝေဖန် နေရင်ဖြင့် ဘယ်တော့မှ ပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး၊
ဒီကိစ္စဟာ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ရေနွေးကြမ်းလေးသောက်ပြီး လေသံကြား တရားနာ
ငြင်းခုံနေရတဲ့ အဆင့်မျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူး၊ အရာရာပြောင်းလဲလာမှုတွေက ဘယ်သူ
ရိုးရိုးလေးပဲ နားလည်ပါတယ်၊ ယ္ခင်ကထက် ယ္ခု အနည်းငယ်ခန့်ပိုကောင်းလာတယ်၊
အောင်နိုင်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဆိုတာ တိုက်ယူရမယ်၊ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင် အသေ
အပျောက်ရှိမယ်၊ အခွင့်လမ်းကောင်းတခု ဆိုတာ မိုးပေါ်က သူ့အလိုလိုကျလာတာ
မျိုးမှမဟုတ်တာ၊ ဆန္ဒ မစောကြပါနဲ့၊ အားကိုးသင့်၊ အားကိုးထိုက်သူဟာ ဘယ်သူ
ဆိုတာ တနိုင်ငံလုံးသိပြီးသားပါ ၊ သွေးမခွဲစေချင်ပါခင်ဗျား ။
ဘီလူးကြီးကို ထောက်ခံသွားတယ်ဗျို့ 
ဦးလေး ဘီလူးပြောတာ ဂွတ်တယ်…..
၀ုတ်တယ် ၀ုတ်တယ် ငဘုန်ကျော် အော်စီမှာ ထောက်ပံကြေးနဲ့
အေးဆေးနေပါ၊ ပြည်တွင်မှာ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေရတာ မသိ
ထောင်ထဲမရောက်ချင်ရင် …. ထမင်းအငတ်မခံချင်ရင် အစောကြီးထဲကနိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့ပေါ့ကွာ…
မင်းအဲ့လိုစာမျိုး ရင်ဘတ်မှာချိတ်ပြီး ဆူးလေမှာတောင်းစားပေါ့ကွာ။
ထမင်းငတ်တာမင်းတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး။ငါတို့နိုင်ငံမှာ မီးလေးလာရင်တောင်
ကငါတို့ပြည်သူတွေအတွက် မျော်လင့်ချက်ကွ။စီးပွားရေးတွေပြန်ဖွင့်ရင်လည်း စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ပေါ်လာပြီး
လူငယ်တွေပိုပြီးအလုပ်အကိုင်ရလာမှာဘဲဆိုပြီးမျှော်လင့်ချက်ကွ။မင်းထမင်းငတ်ရင်တော့ တစ်ခြားနိုင်ငံကိုသွား နိုင်ငံရေးခုံလုံခွင့်တောင်း ….သခင်မျိုးဟေ့ဒို့ဗမာဆိုပြီးအော်နေပေတော့။
ကိုယ့်လူ ရဲ့ ပို့စ်တွေ ကတော့ ၀င်မမန့်ပဲ မနေနိုင်အောင်ကိုရေးထားသလိုပဲ..တော်ချက်များ..
ဒါနဲ့ ဒီစာလေး..”နောက်ထပ် တက်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုပဲ အားကိုးတကြီးမျှော်လင့်တယ်။..”
ကြိုက်တယ်ဗျာ.မျိုးဆက်သစ်တွေအပေါ် စေတနာရှိတယ်ဆိုလို့.. (ယုန်) လိုက်မယ်နော်…
နောက်ပြီးရှိသေးတယ်..” လူဟောင်းတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အရည်အချင်းတွေက သုံးစားလို့ မရခဲ့လို့ ပါ။..”ဆိုပဲ..
ကိုယ့် ဘာသာပြန်မေးကြည့်ပါဦး..ငါကနံပါတ်ဘယ်လောက် မှာရှိမလဲလို့…
စားဘို့အတွက်လောက်ဘဲနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုယင်၊ ခင်ဗျား တစ်ခြားဟာလုပ်စားပါ၊
နောက်ထပ်အမှားအယွင်းဖြစ်မှာကိုလဲမလိုလားကြပါဘူး၊ အကောင်းဘက်ကိုဘဲ
လက်တွေ့လည်းမကျတဲ့ စကားတွေblog တွေနဲ့လူတိုင်း အလွယ်တကူတင်လို့ရတဲ့အင်တာနက်
ဒါကြောင့်အကျိုးမရှိတဲ့post တွေကိုနောက်ထပ်မတင်ပါနဲ့၊ အချိန်ကုန်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်း စစ်ထွက်မိန့်ခွန်းမှာ စစ်သားတွေကို ငတ်မယ်ပြတ်မယ် သေမယ် ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ အားပေးစကား ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဘယ်လို သားအဖတွေလည်း သိဘူးနော်…။
နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ထမင်းငတ်တာကြောက်နေတာပါ…။ တကယ့်..နိုင့်ငံ့အရေးကို.. အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကျတော့…အမေဆီမှာလမ်းစရိတ်မရှိလို့ပိုက်ဆံတောင်းတာ…။ မရလည်း…မငြီးဘူး..။ ကုန်းကြောင်း(ခြေကျင်)လျောက်တယ်ဆိုပဲဗျ…။
အတူတူပဲ…။ ဘာသာရေးလုပ်တဲ့သူကျတော့…အမြတ်မကျန်ရင်(တရားမဟုတ်ပါ)ဘာမှမလုပ်ချင်ကြဘူး..။ တရားဟောတာတောင်…ပိုက်ဆံရမှ…တဲ့..။ မပြောလိုပါဘူး..။ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ပေါ့…။ တကယ့် ဘာသာ့အရေးလုပ်တဲ့သူတွေကျတော့…ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်လုပ်ကျတာပဲ..။ ဘာအရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ…။ အမှန်ဆိုတာက…ဘယ်သူမှလွယ်ကူစွာရတတ်တဲ့အရာမှမဟုတ်တာ..။ ကိုယ်ဘာတွေမှားနေသလဲဆိုတာကသာ..တရားဗျ…။ ဒါမှ..ရှောင်နိုင်တာ..။ ရှောင်မှလည်း..အမှန်ဆိုတာက.. Auto..ရောက်လာရမှာ..။ အခုဟာက.. အမှန်ချည်းပဲလိုက်ပြောနေတယ်လို့…ထင်တယ်..။ ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်း..သေနတ်ပြောင်းလှည့်ကြပါအုံးလားဗျာ..။ တရားဆိုတာ ကိုယ်မှာရှာရမှာတဲ့…။ သူများအမှားမြင်တတ်တာကတော့… သိပ်မထူးဆန်းဘူး…။ သတိထားပါ…။ အားလုံးသော..ရွာသားအပေါင်းတို့လည်း…. ကျမ်းမာချမ်းသာစေဖို့အတွက်…Post.. မတင်ခင်.. Comment..မ၀င်ခင်မှာ…ကိုယ့်သေနတ်ပြောင်းကို… ကိုယ့်ဘက်လှည့်ပြီး.. လိုက်စစ်ပါ…။ မကောင်းတဲ့.. ကိလေသာရန်သူကိုတွေ့ရလို့..သုတ်သင်ပြီးပြီဆိုတော့… လွတ်လပ်ခွင့်ကို..အသုံးချကြပါ…။ ဒါမှလည်း..တစ်ရွာလုံးကောင်းစားကြမှာပါ…။
အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်အောင် မနေသူဟု မှတ်ချက် ပြုပါသည်။
ကိုယ့် အားနည်းချက် တစ်ခုကြောင် အဆင်မပြေ မူကို တစ်ပါးသူအား
လွှဲချ တတ်သူလည်း ဖြစ်သည်။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ မိမိယုံကြည်ချက်ကြောင့် ငတ်တယ်မငတ်ဘူး၊သေတယ်မသေဘူး၊ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမယ့် အမေစုဟာ နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့
နောက်ဆုံးပြယုဂ်တွေထဲကတစ်ခုပါဘဲ။သူ့ နောက်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့ ကိုဌေးကြွယ်တို့ အစရှိသဖြင့်ရှိနေကြသေးတယ်။ဒါတွေ
က အကျဉ်းကျခံနေရတာ ဒုက္ခလို့ တွေးနိုင်ပေမယ့် အားလုံးသောနိုင်ငံသားတွေအတွက်သူ တို့ ပေးဆပ်နေတာပါ။အရှုံးမဟုတ်ဘူး။အမြတ်တွေ
ကိုဘုန်းကျော်ရေ အကို့ ကိုတစ်ခုပြောပြလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော့်အဖေက ၁၉၈၉-၉၀ မှာ သံတွဲခရိုင်လူ့ ဘောင်သစ်ပါတီမှာ ပါတီနာယကဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပါတီရဲ့ ပြည်နယ် ဥက္ကဠဖြစ်ပါတယ်။အကို့ မှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပါတီရဲ့ အရှက်ရစေမယ့် စကားမျိုးတော့မပြောစေချင်ပါဘူး။
စိတ်တော့ မကောင်းပါဘူး……… အလွန်တရာမှ သေးသိမ်ပြီး ညံ့ဖျင်းတဲ့ အတွေးခေါ်တွေ ထင်ဟတ်နေတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို မန္တလေးဂေဇက်မှာ ဖတ်လိုက်ရလို့ပါ။ တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံပြီး ထောင်ထဲမှ အကျဉ်းချခံနေသူတွေကိုပါ စော်ကားလိုက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။…. ကိုဘုန်းကျော်အနေဖြင့် လူဟောင်းတွေဆိုတဲ့ စကားကို သုံးသွားတယ်နော်….. မျိုးဆက်သစ်တွေ ထက်မြက်ဖို့ တိုးတက်ဖို့အတွက်… လက်ရှိမျိုးဆက် (ဟောင်းဆိုရင်လည်း ဟောင်းပေါ့) တွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်… ရှင်းရှင်းပြောရင် ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အကြံပြုလိုတာကတော့ စာတပုဒ်ရေးရင် သေချာတွေးခေါ်ပြီးမှ ရေးပါ ပြီးတော့ စာများများဖတ်ပေးပါ….
ညီအကိုရင်းတယောက်လို စေတနာထားပြီး ပြန်လည်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ကိုဘီလူးကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကို အလွန်သဘောကျပါသည်။
ဒီမိုကရေစီစံနစ်တွင် – တိုင်းပြည်၊လူမျိုးအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ်နှင့်လုပ်ရပ်ကိုသာအဓိကထားသင့်ပါသည်။
ထိုစိတ်ဓါတ် စံ ဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်၊ရဲဝံ့သော၊ တိုင်းပြည် အတွက် ပြည်သူအတွက် စံဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို
နည်းနည်းတော့ ရင့်နေပြီ ကိုယ့်လူရေ … ။
ဘာသားနဲ့ ထုထားတဲ့ လူမှန်းတော့မသိပေမယ့် … ။ စကားပြောရင် ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းတဲ့ အကျင့်ကိုတော့ ပြင်ဖို့ကောင်းနေပြီ ။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားမပေးလဲ ထိုင်ရာကမထ လက်သီးပုန်းပြမနေနဲ့ …. အိပ်နေတာကမှ အကျိုးရှိဦးမယ် … ။ ရှင်မထောက်ခံလို့လည်း … ဘာမှ မဖြစ်ဘူး … ။
စိတ်ကောင်းကောင်းထား .. အသက်မှန်မှန်ရှု… ။ ကိုယ်တိုင်က……စာရေးပြီး………….. စာရေးဆရာတွေ လက်ကြောမတင်းဘူး ဆိုပြီး လက်သီးလက်မောင်းတန်းထားတာ.. အခုတော့လည်း အတိတ်မေ့သလိုလို … အရူးကွက်နင်းပြီးရေးနေတုန်းပါလား … ။
ဒေါ်စုကြည်က သူ့ကိုထောက်ခံအားပေးရင် ထမင်းကို ဝနေအောင်ကျွေးပါမယ်လို့ စာချုပ်ချုပ်ထားလို့လား။
ကိုဘုန်းကျော်…မမန်း မန်းအောင်ဆွ ပြီးတော့… ဘယ်ကောက်ရိုးပုံထဲ ပုန်းနေလဲ..။ ထွက်ခဲ့လေ။
ကွန်းမန့် တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။ များများပြော များများဆွေးနွေးတာကို သဘောကြတယ်။ မှန်တာမှားတာကတော့ အချိန်က အဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။ အဓိက ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောတာပါ။ သူငယ်ချင်းတို့ ကွန်းမန့် တွေကိုလည်း အရမ်းသဘောကြတယ်။ ပွင့်လင်းလို့ ပါ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ အကို့ ကတော့နိုင်ငံရေးသမားလိုလို၊ဘာလိုလိုနဲ့ လောလောဆယ်တော့
အဲ့ကောင်phone kyaw ဆိုတဲ့ကောင်က post တွေလျောက်ရေး ပြီးရင် ကွန့်မန့်တွေများများ တက်လာတာကြည့်ပီး ဖီးတက် နေတာ ဒီကောင့်အုန်းနောက်က ပြည့်မှမပြည့်တာ
မောင်ဘုန်းကျော်ရဲ့ ပို့စ်တွေထက် မောင်ဘုန်းကျော်ရဲ့ ဘ၀အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်၊အင်းစိန်မှာမွေး ၊မင်္ဂလာဒုံစစ်တပ်ထဲမှာကြီးပြင်း၊အဖေကတပ်ကြပ်ကြီး အသက်(၂၀)၀န်းကျင်မှာတောခို၊ဘာကြောင့်တောခိုခဲ့ရတယ်၊စစ်တပ်ထဲမှာနေပြီး အဖေရှာကျွေးတဲ့ ထမင်း၀၀ကို မစားပဲ၊ဒေါ်စုကိုထောက်ခံလိုက်လို့ ထမင်းငတ်ပြီး တောထဲကိုထွတ်ပြေး ….
လူုဘောင်သစ်မှာလည်း ဘယ်လိုနေရာမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်၊ဘာကြောင့်ထမ်းဆောင်ရတယ်…(ဥပမာ ထမင်းငတ်မှာစိုးလို့)…
ထို့နောက် တတိယနိုင်ငံထွက်ခွါရတယ်…ဘာကြောင့်ထွက်ခွါရတယ်…ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်များကြောင့် ထွက်ခွါဖြစ်တယ်..(ဥပမာ…ထမင်း၀၀ ပိုစားချင်လို့)…ယခုအခါ မထောက်ခံနိုင်တော့ပါ….အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော…ထမင်း၀၀ စားနေရလို့ထင်ပါတယ်။
ကွန် မန့့်တွေကိုတော့ သဘောကျတယ်ဗျာ
အားလုံးက နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့ပြောနေကြတာပါပဲ ။
နိုင်ငံရေးခိုလူံခွင့်နဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့
သြစီမှာ ဆန္ဒပြလို့သူဟောတဲ့တရားပွဲလူတွေမလာရင်
လာတဲ့လူတွေကို ( အမျိုးသမီး၊သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကို) မအေနှမကိုင်ပြီး စက်ကြီးနဲ့ဆဲတာတဲ့ဗျ။( သူ့ ဘလော့မှာ ရေးထားတာ)
သူကဆဲပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာ။ ဆဲနည်းကိုတော့
သူ့ အဖေစစ်တပ်ကပဲ သင်ပေးလိုက်သလား ။
လူ့ ဘောင်သစ်ပါတီကပဲ သင်ပေးလိုက်သလား ။
ဖုန်းကျော်..ကိုနောက်ကနေပြန် ခေါကြည့်ရင် ဖာ???တဲ့ အဲ့လောက်ပဲအဆင့်ရှိတာ ပြောမနေနဲ့ ကြောက်လို့ထွက်ပြေးပြီး ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကြမ်းချင်နေတာ ကြာကူလီလို့ခေါပြန်ရင်လည်း ကြောင်တယ်လို့ပြန်ပြောအုံးမယ် ကြပိုးကြီး…..
အချောင်သမား ငဘုန်းကျော် အော်စီမှာနေတယ်ဆိုပြီး ဖင်ကောင်းစွတ်ကျယ်မနေနဲ. ကျွန်တော်လဲ နိုင်ငံခြားမှာနေတာဘဲ နိုင်ငံခြားမှာ နိုင်ငံေ၇းလုပ်တဲ့အဖွဲ.အစည်းအချို.ဟာ နိုင်ငံေ၇းကိုဘန်းပြပြီး စည်းပွါးေ၇းလုပ်နေတဲ့အချောင်သမားများပါတယ် ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သိပါတယ် ကားကိုထည်လည်းစည်း ညတိုင်းnight club တက် ဒုတ်ခသည်အဖြစ်လျှောက်သူတွေဆီက ပိုက်ဆံတောင်းပြီး မသထာစာလိမ်စားနေတဲ့သူများပါတယ် မသိ၇င်တော့တကယ့်မျိုးချစ်နိုင်ငံေ၇းသမားတွေလိုပါဘဲ ….